Iska-horimaad ka dhacay Bariga Berbera oo hal qof ku dhintay | Somaliland.Org
Iska-horimaad ka dhacay Bariga Berbera oo hal qof ku dhintay
June 29, 2008	Berbera (Somaliland.org) – Hal wiil oo dhallinyaro ah ayaa ku dhintay iska horimaad maanta ka dhacay duleedka Bari ee magaalada Xeebta ku taalla ee Berbera, halkaas oo ay tacshiirad isku weydaarsadeen ciidanka Booliska iyo koox dabley ah.
Iska horimaadkaas ayaa la sheegay inuu salka ku hayo khilaaf dhul, waxana la sheegay in ciidan boolis ahi ay saaka galeen weerareen dhulkaas oo ku yaalla Batalalaale, bariga magaalada Berbera, si ay uga raraan nin sheeganaya dhulkaas oo dowladda Hoose ee Berbera ay siiso nin ganacsade ah. Hase yeeshee, waxa la sheegay in dabley hubaysan oo taageerayey ninka dhulka sheeganaya ay ka hortageen booliska.
Sida ay sheegeen dad goobjoog ah wiilka dhallinyarada ah ee iska horimaadkaas ku dhintay ayaa ka mid ahaa dad deris la ah dhulka iska horimaadku ka dhacay oo goobta ku soo xoomay. Lama oga wax khasaare ah oo kala gaadhey labada dhinac ee Booliska iyo kooxda dhulka ku dagaalmaysey, waxaase la sheegay in sarkaal ka tirsan Boolisku uu dhaawacmay.
Dhinaca kale, dadka ka gadoodey geerida wiilka dhallinyarada ah oo la sheegay in ay ku dhacday rasaas boolisku ridayey ayaa magaalada Berbera gudaheeda galabta ka afduubay gaadhi Landcruiser ah oo ay leedahay dekedda Berbera, kadib markii ay xoog kaga dejiyeen darawalkii wadey.
Ciidanka Booliska iyo odayaasha deegaanka ayaa ka daba tegey gaadhigaas, waxaana la sheegay in dhawr qof loo xidhay dhacdadaas.
Goobta iska horimaadku ka dhacay ayaa la sheegay inay gacanta ugu jirto kooxdii dableyda ahayd, waxaase la sheegay inay xiisad kululi ka taagan tahay khilaafka dhulkaas iyo geerida wiilka dhallinyarada ah ee ku dhintay iska horimaadka.
Dhulka Bariga Berbera, gaar ahaan dhulka u Batalaale ee u dhow magaalada ayaa khilaaf weyni ka taagan yahay, iyada oo dowladdu ay bilowday inay iibiso dhulkaas oo qaarkood dad degan yahay ama uu sheeganayo lahaanshihiisa.